MUUQAAL: Somaliland oo si kulul uga Hadashay Wasiiro ka Tirsanaa oo ka degay Muqdisho iyo Waxa dhacay | KALSHAALE
MUUQAAL: Somaliland oo si kulul uga Hadashay Wasiiro ka Tirsanaa oo ka degay Muqdisho iyo Waxa dhacay
Feb 13, 2019 - 17 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Wasiir ku xigeenka Arrimaha Gudaha ee Maamulka Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ka hadlay wasiiradii ka tirsanaa Xukuumadii Somalilad, oo ka dagay Magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in wasiiradaas ay ugu dambeyn dowladooda kasoo codsan doonaan in la cafiyo isla markaasna ay deegaankooda dib ugu soo noqonayaan, Wuxuuna xusay inay shaqo tag yihiin isla markaasna ay Muqdisho u tageen sidii ay lacag usoo heli lahaayeen.
Wuxuu wasiirka sheegay inay Wasiiradaas u fiicneyd inay tagaan Kismaayo iyo meelaha kale oo uu sheegay inaysan qaraxyada ka dhicin, wuxuu ku tilmaamay kuwa naftooda halis geliyey.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA IYO HADALKA SL
Magacyada xubnaha ka socda Somaliland ee soo gaadhay Magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah Xasan Daahir Dhimbil oo horay u ahaa wasiir ku xigeenkii hore ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland, Khadar Axmed Diire Wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda Caddaaladda iyo Axmed Keyse Guray oo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland soo noqday.
Qofka kale oo isna la xaqiijiyay in uu wasiirradii Siilaanyo ka mid ahaa hayeeshee aan magaciisa la xaqiijin ayaa ka mid ah,waxaa kale oo ku wehliya xubno u badan dhallinyaro oo u soo wareegay Muqdisho.
Waagii reer Qurac isku wareysteen Kenya ayaan Abwaan Sanqoole ka maqli jirney ” NINKASTO wuu imaan CAKAARO””
Hadda Ninkasto wuu imaan Muqdisho
Yaa ii jilciyo, muxuu dhahey
– Waad ogtahiin maxey DHAHEEN
– Waad ogtihiin waxey SAMEEYEEN
Waxaan u maleyn in la arko asagoo Xamar ilko ka sameysanhayo.
Qanyare ayaa siduu noo lahaa lacagtii NA iyo Maanafesto ayaa la soo qaban, (maxaad ku ogeyd Habar-gidir Gacan fudeyd) Murusade oo saqiir iyo kabiir ka maqneyn ayaa subaxdii dambe yimid Madaxtooyaddii Dowladdii Cali Mahdi hogaamin hayey
Markaas ayaa la dhahey ku soo dhawow Na.
* Jiko Abgaal waa jago banaan, ninkii soo jabaa Jiifsahaa
Muuse laftiisa ayaa u baahan mijo baxsi.wuu ku caajisay dhex wareega hargeysa.
Dabshid/aka mr Bahal
Meeshan kalshaale.ca miyaad ku dhex nooshay?
Hadh iyo habeen, sanado, ciic daa uun baad ka haysaa???
Hadaad meeshan, sanad, bil, laba bil ka maqnaato, oo aad maalin soo eegto; boga aad furtaba waxaa ku jira Comment Dabshid/mr bahal!kkk
Waar wuxu miyaanay nolol kale haysan?kkk
Oday meesha haku asaasiqin, waxaan aad qorayso badankooda walaahi inaan cidi fahmin! Xikmad-na maleh!
Waa iga talo!kkk
Waa runta muuse laftisa ubaahan manja baxsi
Nasiibkisa kuso beegay marki laxidhiay lowladihi
Jaarka e bishi laba jeer laso boqanjoray albaabada
Waxa soxidhay madaxwaynaha jamhuuriyada barakaysan
Mudane farmaajo guuuul Dawlada Nabad iyo Nolol WBT
Mujaahid Muuse Biixi wuxuu xukumaa dhul dherer Lawyacado – Tukaraq 1044 km. Lawyacado- Badhan waa 1187 km. Balaca dhawr jeer buu intaa ka badan yahay.
Markaa see Jimicsi ugu baahan yahay?
@mise jimicsiga waxaad ula jeedaa kan aad Gabdhaha walaalahaa kaga iibiso askarta angudhuudhiga ah ee Xalane ku nool.
Xaasha, waana naga xaaraan gabdhahaas!
Khaakhtufa hoohaa hanoolaato!
Adiga falastiini xero iigu jira baad la mid tahay, waxaad doonto qor! kkk
Qaxootiga hadaan kaa dhigay, cabudhin kuugu dari maayo!
Laalayso naaso dheer
Baryahan sibaad u waalatay e ma odaygiba kaa harbay
Waadigan xagxaganaya raga barxada kalsheele
Fekerkoda ka dhiibta e abaayo siilka iskuqabo
Yaan lagu karbaashine nacasyahay naasaha dheeri kkkkkkkkk
Walaaleheen itoobiya goorma ayeynu soo booqan?
Takale waxaan ogaaday in wixii maamulka soomaaliland taageeri jiray ahaayeen dadkii taageeri jiray ururka waadani.
Sababtoo ah ku xigeenka muuse ayaa dhoofey saa wax garoonka ka qaada ayuu waayey.
Taas lama sii yaabin oo waxaan islahaa waa cilad farsamo.
Maalintii denbana waxaa dhoofey wasiirka arrimaha dibadda saa ka sii daran cali khaliif baa loogu cay.
Awal hore qof maamulkaa ka socda markuu dhoofo garoomada ayaa la sii seexan jiray.
Marka jeegaan waxba dhaqaajin weydee nimankii wadani ha la doono.
Sxb waan ku salaamay waa hore:
Goorma ayeynu maamulkii khaatumo boodhka ka jafeynaa?
Takale maamulkii somaliland goosasho ka quusayee maad ku deydaan xeer woqooyi inta aad soo kala dhuuman lahaydeen idinka oo kala socda.
Waan kaqaaday salaanta midlamidaan hawada kuso marinaya
Sxb awelba majirin wax layiraahdo goosasho
Waa jabhad cadhotay tiina albaabada lagaso xidhay
Hasugi waayin maalin dhow biixi laftisa o kadega
Majirto wax layiraahdo konfur iyo woqooyi nin waliba
Dowlada somaaliya dhinaco kaso gaadho haka qabsado
Dalku waa mid awelba qolyahaasi waxay rabeen sed bursi
Kiina lawaa howbiqin mad madba loso hobanaya kkkk
Walatolay markaasay oloshay kkkkkkkkkkkkkkkk
Kala cararaay ha israacdo
Axmed Siilaanyo oo muqdisho
Muuse Biixi asigoon farmaajo la hadlin ma seexdo
Feysal cali waraabow adigaa afkiisa ka sheegay inuu maaalin walba la xariiro xamar Shacabka G.Waqooyi iyo siyaasiyiinta wey is fahmeen in aysan jirin wax gooni ISU taag ah oo et meesha taal biliqo iyo boob CAD tacab aduunyo oo aaqiro beel
Gala bakaarha Gala xamar
Qaldaamiintii wey Isoo saxeen
waar horta xamar intee dad qaadi kartaa haddii lagu shamuumo hhhhhhhhh
Xamar mug weyn hadii xitaa la soo raro ciisaha degan shiniile wey qaadi kartaa.
Ciisoow rax dheh.
Lamalaha dadku ha soo guuraan ee waxaa la leeyahay caasimadooda ha aaminaan.
Burburkii itoobiya waxaa laga faaiiday in soomaalidu ogaato in aan la isu dhaamin.
Waayadan ma maqlin walaalaheen itoobiya iyo wiilka itoobiyaanka ah ayaa iga xiga wiilka xamar ku dhashay.
Horaa loo yiri xoolo iyo xukun hadaad rabto xamar
Deg markaa dadka somaliyed inay xamar u hajiran
Wax cusub maaha qarniyaal baa loo socday waana
Lagu sii socon siisow iyo sabaax suuqa xamara laga
Sxb xamar reer wsqooyi ayaa nolosha baray
.iska jareer baad ahayd guryahana xaarka loda kadhist a
Siisaw iyo sabaaaxna maad aqoon gaadhi fiyaad baad ka yaqaan ay
Sxb yaa bilaa mu dish? Baadh taariikh da
Maalin kaan kaa tegayna wwaadigaa indhaa isku qabsaday
Turkish iyo madaw iyo international community kolba kugu ci yara ayaan